धेरै पढेका नेपाली कलाकारहरु को को हुन् ? कसको पढाई कति ? -
धेरै पढेका नेपाली कलाकारहरु को को हुन् ? कसको पढाई कति ?
अभिनेताका साथै टेलिभिजन प्रस्तोता समेत रहेका महानायक राजेश हमाल नेपालका धेरै पढ्ने सेलिब्रेटी मध्ये एक हुन् । बाल्यकालदेखी नै पढाईमा अब्बल उनको अध्ययनप्रतिको चासो कहिल्यै कम भएन । यहि चासोको प्रतिफलस्वरुप उनले पंजाबस्थित चण्डीगढ क्याम्पसबाट अंग्रेजीमा डिग्री हासील गरे । सयौँ फिल्ममा अभिनेय गरेका राजेशले फिल्म युगदेखि युगसम्मबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनले सयौँ फिल्ममा काम गरे ।
Previous नदि माथी बरफको यस्तो विशाल रहस्यमय चक्र भेटियो, मानिसहरु हेरेरै दंग
Next एक बच्चाकी आमा करिनाले दिईन फेसन पत्रिकामा अहिले सम्मकै हट एण्ड सेक्सी पोज (फोटोहरु)